Rafitra fanolorantena 5: Ny asa fanokafana misokatra sy manao ny marina 1.Ny orinasanay dia manamafy orina ny fananganana ny fitsinjovana ny crédit sy ny fifehezan-tena, mitana mafy ny lalàna amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa sy ny tombontsoany, manatanteraka ny adidin'ny mpandraharaha, ... .
Kuala Lumpur, 6 aprily (AFP) - tamin'ny 12 ora androany, ny coronavirus novolavola tao Malezia dia nanamafy 131 tranga ary maty 62, ka nitondra ny isan'ny tranga voamarina ho 3.793. Androany dia olona 236 no navotsotra tamin'ny hopitaly, nitondra 1 321 ny isan'ny trangana naratra. Ankoatr'izay, a ...
Zava-tsaina iray mba hisorohana sy hifehezana ny areti-mifindra - HEBEIPUKANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. entana sy fitaovana nomena mba hiadiana amin'ny COVID-19
Manomboka amin'ny taona 2020 ny taom-baovao, ny fihanaky sy ny fivoaran'ny COVID-19 dia misy fiantraikany amin'ny fiainana mahazatra amin'ny fianakaviana maro. Ny mpiasa Médical any WuHan sy ny toerana hafa manerana ny firenena dia miasa amin'ny sehatry ny fisorohana sy ny fihanaky ny areti-mifindra. ny fahasalaman'ny olona, ​​ny XuShui ...